साहित्यकार बन्ने दयाहाङको मोह
२०७४ फागुन २१ सोमबार १०:२५:००
काठमाडौं । अघिल्लो साता सञ्चारकर्मी यज्ञश पहिचान पुरस्कार ग्रहण गर्दै थिए । २ लाख २ हजार रुपैयाँको उक्त पुस्कार मण्डला थिएटरमा वितरण गरिँदै थियो । मुख्य अतिथी थिए तिलविक्रम नेम्वाङ (वैरागी काइँला) । थिएटरको अँध्यारो कोठामा तिलविक्रमसँगै अग्रज साहित्यकार नारायण ढकाल, खगेन्द्र संग्रौला, श्रवण मुकारुङ, कुमार नगरकोटीदेखि पछिल्लो पुस्ताका साहित्यकार राजन मुकारुङदेखि बुद्धिसागरसम्म थिए ।
कार्यक्रम सुरु भैसकेको थियो । अर्ध अन्धकार थिएटरमा दयाहाङ राई लुसुक्क छिरे । कार्यक्रम चलिरहेको थियो । नजिकै रहेका साहित्यकारसँग उनी हेलोहाई गर्दै थिए । हलको मध्यतिर बसेका दयाहाङ सुटुक्क अगाडि सर्दै जाँदैथिए । अधिकांश साहित्यकारसँग उनको पुरानै परिचय रहेको प्रतीत हुन्थ्यो । रङ्गमञ्च हुँदै सेतो पर्दाको यात्रा तय गरेका दयहाङ कसरी साहित्यकारको समिपमा पुगे ?
जान्न अघिल्लो दशकतिरै फर्किनुपर्छ । भोजपुर थातथलो भएका दयाहाङ सानैदेखि साहित्यमा रुचि राख्थे । कथामा उनको विशेष झुकाब थियो । साहित्यका किताब खोजी–खोजी पढ्थे ।
कथा लेख्न रुचाउँथे र लेख्थे पनि । कथा लेख्न उनलाई शिक्षकहरूले हौस्याउँथे । उनी स्मरण गर्छन्, “म कथा लेख्नकै लागि जन्मिएको हुँ झैं लाग्न थालेको थियो स्कुलमा ।”
बाल्यकालमा पढेका दन्त्यकथा र लोककथाका चरित्रहरूलाई लिएर त्यस्तै अर्को कथा लेख्न मन पथ्र्यो उनलाई ।
तर, उनले पढेका अधिकांश कथाका विषयवस्तु सहरका हुन्थे । उनी भए गाउँका । गाउँका कथा सहर पुगेर सकिन्थे ।
उनको मनमा एउटा प्रश्न सधैं उठिरह्यो । गाउँका कथा गाउँमै किन सकिँदैन ? गाउँका कथा गाउँमा बसेर मात्रै लेखिँदैन । लेखे पनि त्यो पूर्ण कथा हुँदैन । कथामा सहर पनि मिसिनुपर्छ । तर उनी गाउँमा थिए, सहरको स्वरुप पनि देखेका थिएनन् । थिए त केवल कथा र उपन्यासमा ।
लाग्यो– कथा लेख्न पनि सहर जानुपर्छ । नगवेली डाँडाहरु छिचोलेर सहर पुगेपछि मात्रै कथा पनि छिचोलिन्छ ।
एकातिर कथाको विषयवस्तु खोज्दै सहर जाने हुटहुटी । अर्कातर्फ माओवादी द्वन्द्वले गाउँमा बस्न नसक्ने परिस्थिति । वि.सं. ०५८ सालको एक दिन कथा लेख्ने कल्पनामा सयरमा उनी सपनाको सहर काठमाडौंको बस चढे ।
साहित्यप्रति रुचि थियो । उनी साहित्यकारको घेराभित्र छिर्न थाले । कवि, लेखकहरूलाई भेट्न थाले । उनी साहित्यिक पुस्तक–विमोचनमा जान्थे । सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे । पेन्टिङ र फोटोग्राफी–प्रदर्शनीमा जान्थे । गीती एल्बम विमोचन समारोहमा पुग्थे । उनलाई यस्ता कार्यक्रमको माहोल मन पथ्र्यो ।
साथीसंगत पनि कलासाहित्यकै हुन थाल्यो । नियमित भेटघाट र उठबस कलाकार र कलाप्रेमीहरूसँग नै हुन थाल्यो । कवि, कलाकारहरूसँग भेटदे झनै उनलाई ‘मैले जानेको लेख्ने हो र लेख्नुपर्छ’ भन्ने मनमा लागिरह्यो ।
साथी सर्कलको घेरो फराकिलो थियो । साहित्य र कलाका साथीहरु थुप्रै्र थिए । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक–महोत्सव भइरहेको थियो । उनी त्यहाँ नाटक हेर्न गए ।
दयाहाङलाई नाटक मन पर्यो । नाटकको नियमित दर्शक भए । अर्को साल पनि उनी नाटक–महोत्सवमा गए । नछुटाई नाटक हेरे ।
नाटकले उनको मस्तिष्कमा रहेको साहित्यकार बन्ने सपना घर भत्काइदियो । उनले सोचे– मैले सोचेजस्तो छैन कथा र पुस्तक लेख्न । उनलाई लाग्यो, “मेरा लागि नाटक हो । म नाटक लेख्न र निर्देशन गर्न सक्छु ।”
त्यसैले कथा लेखनतिर हिँडेका उनका पाइलालाई त्यहीँ विश्राम दिए र मोडिए नाटकतिर । र, नाटकको बाटो हुँदै उनी रजतपटको यात्रातिर लागे । कथा लेख्ने उनको सपना अधुरै रह्यो । रङ्गमञ्च र सेतो पर्दामै उनी रमाउन थाले । तर, अहिले पनि पुस्तक अर्थात साहित्यतर्फ उनको रुची २० को १९ भएको छैन । त्यसैले त दयाहाङ अहिले पनि पुस्तक विमोचन लगायतका साहित्यीक कार्यक्रममा पुग्छन् । साहित्यकारहरुसँगको चिनजान उस्तै छ । भलाकुसारी उसैगरी हुन्छ ।